Masaka sanduuqa makaa/Tarree
Sanduuqa Makaa/Masakaa Sanduuqa Tarree
Yoo sanduuqa makaa ykn tarree galmee keessatti saagne, masakaan ofumaan eegala. Masakaan kun odeeffannoon kam akka mul'ata haala mararaa ta'een ifteessuf eehama.
Kamshaa Unkaa Too'atamtootaa bani sajoo Sanduuqa Makaa yookin Sanduuqa Tarree cuqaasitti dirree burqisiisuuf immoo hantuuttee harkisii Walindhaan Kuussaa deetaa Unka keessatti argamuu qaba.
Sajoo Masaka Banaa/Dhaamaa icon to keep the wizard from starting automatically.
Masakoonni sanduuqota makaa fi tarref ?. Kunis sababa uumama dirreewwan too'annootif:
Yoo barruun gabatee qabaate, Fakkeenyaaf, Lakkoofsi dhiheessaa, sanduuqni tarreethe list box can use the "Supplier number" link to display the name of the supplier from the supplier table. On the Field links page the Wizard will ask you about all the settings required for this link.
Gabatee Maalimaa / Sanduuqa Tarree / Masakaa Sanduuqa makaa: Deetaa
Masaka Sanduuqa Makaa / Sanduuqa Tarree: Gabatee Filannoo
Gabatee gabateewwan kuusaa deetaa irraa argaman kan qabiyyeen isaa akka galfata tarreetti mul'atuu qaban.
Masakaa Sanduuqa Makaa/Tarree: Filannoo Dirree
Dirree deetaa gabatee fuula duraani keessatti ibsame irraa fili, qabeentoota sanduuqa makaa ykn tarree keessatti mul'atuu qaban.
Masakaa Sanduuqa Taree: Geessituu Dirree
Gatiiwwan dirreewwan gabateewwanii kamii fi gabateewwan tarree koronyatuu agarsiisa.
Masakaa Sanduuqa Makaa: Dirree kuusaa deetaa
Dirreewwan walqabateen, gatii dirree kuusaa deetaa keessatti olkaa'uu ykn gatii kana unkaa keessatti mul'isa.
Dhiisi cuqaasuun jijjiirama wrramee tokkolee osso olhinkaaiin qaaqa cufa.
Filannoowwan qaaqa keessatti ejattoo duraa irratti uumaman mul'isi. Qabduun kun fuula lama irraa qofa kakkaafamuu danda'a.
Qabduu itti aanee cuqaaasi, akkasumas masakichi haalataalee qaaqa ammee fayyadama sana booda gara eejjatoo itti aanutti fufa. Yoo eejattoo xumuraa irra jiraatte, qabduun kun Uumi ta'a.
Title is: Masaka sanduuqa makaa/Tarree